November 4, 2020 - Padaethar
ခုခေတ် ၁၅ ၁၆ မိန်းကလေးတချို့ ရိုင်းတာကို ဂေါ်တယ်ထင်နေကြတယ်…အပြောအဆိုတွေက ထမိန် ထဲကမထွက်ဘူး…
မိန်းကလေးတွေ လုံးဝ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ သူတို့ ချစ်သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ် (၄) မျိုး … အချစ်ကြီးတဲ့နေရာမှာ မိန်းကလေးတွေက နာမည်ကျော်ကြပါတယ်။ ဒီလို အချစ်ကြီးပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးတွေမှာ ချစ်သူကို ဘယ်လိုမှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်တောင် လုံးဝ ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ မရတဲ့ အရာတွေကတော့… (၁) သစ္စာဖောက်တာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အမုန်းဆုံးအချက်ကတော့ သစ္စာဖောက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ လူသိရှင်ကြားတွဲနေလျက်နဲ့ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာဖောက်သွားတာကို အမုန်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်စေ၊ ခေတ္တဖြစ်ပြီး ပြီးသွားတာ ဖြစ်စေ မိန်းကလေးတွေက အရမ်းမုန်းပါတယ်။ (၂) အပြိုင်ထားတာ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ့်အပေါ်ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ဂရုတစိုက်ချစ်ကြခြင်းလို့ မိန်းကလေးတွေက နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါကို နောက်တစ်ယောက်ပါ … Read more
ကောင်လေးတွေ ကိုယ့်အပေါ်နှစ်သက်လာစေမယ့် နည်းလမ်း (၁၁) ခု
ကိုယ်ကြိတ်ခိုက်ရတဲ့ကောင်လေး ကိုယ့်အပေါ်နှစ်သက်လာစေမယ့် နည်းလမ်း (၁၁) ခု တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ချစ်လာဖို့ ဆိုတာက တစ်ကယ်တော့ သူ့စိတ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တဲ့ အရာပါ… ဒါပေမယ့် သူ့ဘက်က ကိုယ့်ကို သတိထား မိလာအောင်တော့ လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်…. ၁။ ပင်ကိုယ်ဟန် အတိုင်းပဲနေ ပါ။ အရမ်းကာရော ပြင်ဆင်တာတွေ ဟန်ဆောင် တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ၂။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိပါစေ။ ဘိုသီဘတ်သီနဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ် ပုံစံကို ဘယ်သူမှ သဘောမကျ ပါဘူး။ ၃။ သူပြောတဲ့ စကားတွေကို ငြိမ်ငြိမ်လေး နားထောင်ပေး ပါ။ ၄။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရယ်မောတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ နှစ်သက် ကြပါ တယ်။ ၅။ ကိုယ်ပိုင် … Read more
တစ်နာရီ (၈၀၀၀) ပဲ ယူတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်အလန်းမလေး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေ… တစ်နာရီ ၈၀၀၀ ပဲ ယူတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်မလေး လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေပန်းစားနေလူမှုကွန်ရက်မှာ လက်ရှိနာမည်ကြီးနေပြီး ပေါက်နေတာကတော့ … ပုရိသတွေကြားမှာကြည်နူးနှစ်သိမ့်စေတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတမျိုးနဲ့ အပျံစား ဆက်ဆီကျကျ မော်ဒယ်လေး ဖူးဖူးပြည့်စုံ (Phoo Phoo Pyaw Sone) ပါပဲ …. သူက သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖေ့ဘွတ်ခ်ပေ့ခ်ျဖြစ်တဲ့ (Phoo Phoo Pyaw Sone) ပေါ် မှာ ညှို့ငင်နိုင်လှတဲ့ အလှဓာတ်ပုံတွေ နဲ့လိင်ဆွဲဆောင်အားပြင်းတဲ့ ဆက်ဆီ ဓာတ်ပုံတွေကို ပုံမှန်လို တင်ရှိတတ်ပြီး… သူ့ရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေက လူမှုကွန်ရက် ပေါ်မှာ တနေ့ထက်တနေ့ ပိုတိုးလို့ချစ်ခင်အားပေးလာနေကြောင့်မြင်သူကကာတိုင်းကို အမိုက်စား ဖမ်းစားညှို့စားထားနိုင်သူလေးလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပို့တခုကြောင့်လည်း … Read more
အလကားရတဲ့ အခမဲ့ ပြည့်တန်ဆာ…
နည်းနည်းခါးမယ်။အမှန်တရားမို့ တရားဝင် လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့ Living together နေတဲ့ မိန်းခလေးတွေဟာ တကယ်တော့ အခမဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေပါ။ သူတို့တွေဟာ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပဲ အခမဲ့ အလကား ရတဲ့အမျိုးပေါ့။ သူတို့အတွက်လိုတာက ဟန်ဆောင်မှုတွေပါတဲ့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးတခွန်းပါပဲ။ ဒီဘက်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပျိုစင်ဘဝကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ မိန်းခလေးတွေ တနေ့တခြား တိုးပွားလာတာက ဝမ်းနည်းစရာပါ။ ချစ်တယ်ဆို တဲ့စကားလေးတခွန်း နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် မဟုတ်သေးတဲ့…. တစိမ်း ယောကျာ်းတယောက်ကို အလဟတ်သတ် လွယ်လွယ်နဲ့ အလကား ပေးလိုက်ရတာ တွေးတတ်ရင် တကယ်တော့ ရင်နာစရာပါ။ ကိုယ်က ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ Living together နေလိုက်လို့ သူ့က ကိုယ့်ကိုယူမှာ သေခြာရဲ့လား? သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကရော မပြတ်ကြတော့ဘူးလား? … Read more
ယောင်္ကျား နှင့် မိန်းမ တို့၏ ချစ်ရေးချစ်ရာ နှင့် အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း တစေ့တစောင်း!!!!
ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ အတူပေါင်းသင်းတာက ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်သလို အနုပညာတစ်မျိုးဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပေါင်းသင်းရာမှာ ကိုယ့်ဘက်က တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ဘက်က တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် မလိုအပ်တဲ့ အတိုက်အခိုက်တွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်စောင်းတစ်ချက်၊ အပြုအမှုတချို့က ယောက်ျားတွေကို အံကြိတ်စေနိုင်ခဲ့တယ်။ သင်ရဲ့ အိမ်ကြီးရှင်မမှာ အောက်က ယေဘုယျအချက်တွေ ရှိပါသလား? (၁) ချိန်းတွေ့ချိန် တမင်နောက်ကျခြင်း “ချိန်းတွေ့ချိန် နောက်ကျခြင်းအနုပညာ”ကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်ခဲ့မှန်းမသိပါဘူး။ ယောက်ျားလေးရဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်မှုအပေါ် လိုက်ပြီး ချိန်းထားချိန်နဲ့ (၅)မိနစ်၊ (၁ဝ)မိနစ်ထိ တချို့က ဒီထက်ပိုနောက်ကျတတ်ကြပြီး ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့ ယောက်ျားလေးရဲ့ခံစားချက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြတယ်။ ယောက်ျားလေး စိုးရိမ်တဲ့အထိ၊ စိတ်ပူတဲ့အထိ ပြီးတော့ စိတ်တိုတဲ့အထိ စောင့်ခိုင်းစေပြီး “နောက်တစ်ကြိမ် ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့”လို့ ကိုယ့်ကို အသံမာနဲ့ … Read more
(1)မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ … ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ရမယ်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို ပဲ့ကိုင်နိုင်ရမယ်။ ယောကျာ်း ယူသည်ဖြစ်စေ .. မယူသည်ဖြစ်စေ … ဘဝမှာ ယောကျာ်းဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်ရမယ်။ ယောကျာ်းတစ်ယောက် ပေးသွားတဲ့ သင်ခန်းစာကို ဘဝရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက် ပြောင်းလဲပစ်ရမယ်။ တမြေ့မြေ့ခံစားပြီး ကြေကွဲတမ်းတ မနေရဘူး။credit to သမီးဆိုး (2.)ကောင်းမွန်သော အမျိုးသမီးဆိုတာ…. 1။ သူပြုံးမှကိုယ်ပြုံးမဲ့အစား ကိုယ်ကစပြီးပြုံးပြလိုက်ပါနော် 2။ ကံတရားပါ ကွာလို့ ပြောနေသ၍ ဥာဏ်သမားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး 3။ စေတနာ သည် ကံတရား၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ 4။ လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းပေမယ့် ခဏခဏတော့ မမှားသင့်ဘူးလေ 5။ ပျက်စီးခြင်းတွေထဲမှာ ဆုံးရှုံးမှု အများဆုံးကတော့ စိတ်ဓါတ်ပျက်စီးခြင်းပဲ … Read more
“မိန်းမများ မတက်ရ ဆိုတာ”
မက္ကဆီကို နိုင်ငံဆိုတာ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ ခရစ်ယာန်များတဲ့ နိုင်ငံ။ အဲဒီ မက္ကဆီကိုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်စ လူ (၃၀) လောက် မြန်မာပြည် ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ မန္တလေးက မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး ဝင်ဖူးပြီးတော့ စစ်ကိုင်း ရောက်လာတယ်။ ရောက်လာပြီး ပါချုပ်ဆရာတော် ကျောင်း ရောက်လာပြီးတော့ ကျောင်းစောင့်တွေကို ခွင့်တောင်းတယ်။ “ဆရာတော်နဲ့တွေ့တုန်း မေးစရာရှိတာလေး မေးချင်ပါတယ်” တဲ့။ ဒါနဲ့ ဆရာတော်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေကတွေ့တဲ့အခါ မက္ကဆီကန်သူ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ဘာမေးတုန်း ဆိုရင် “ဘုရားကြီး ဝင်ပြီး ဖူးတဲ့အခါမှာ (အမျိုးသမီးမဝင်ရ) ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် တွေ့လာ တယ်တဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာက အဲဒီလို ခွဲခြား ဆက်ဆံ သလား” တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ … Read more